Apple inonzi iri kushanda pa 20-inch foldable MacBook, asi zvinogona kutora nguva kuti mudziyo weiyi fomu factor iite. Ipo hofori yetekinoroji ichienderera mberi nekunakisa iyi MacBook mutsauko, tarisa iyi yakanaka pfungwa, inonzi 'MacBook Folio,' iyo inofungidzira chaizvo izvo zvaunoda kuona kubva kune inotakurika inotakurika Mac.
MacBook Folio Concept Ine Isingaite Yenhanho Yehutete, Pamwe NeTouchscreen Keyboard uye Stylus Tsigiro.
Iyo MacBook Folio pfungwa inouya nezvose Bata ID uye Face ID rutsigiro. Antonio De Rosa neungwaru akapa muverengi wezvigunwe parutivi rwechishandiso, achiita kuti zvibate nenzira yakafanana neiyo iPad Air 4. Kana ari maFace ID sensors, akaiswa mu 'piritsi + punch-hole' cutout pa. pamusoro peiyo foldable MacBook panzvimbo yekunanga kumusoro uchishandisa notch. Isu tinonzwa kuti iyi ndiyo nzira chaiyo nekuti haingope yekuwedzera screen real estate, asi haina kukanganisa dhizaini.
Iyo yekubata skrini kiyibhodhi yeMacBook Folio inopetwa sechiratidziro, uchifungidzira kuti unoda kuwana kutarisisa kwakakura kwechero chauri kuona. Kungoti kana iwe uchida kuita mamwe mabasa ane chekuita nekubudirira, kiyibhodhi icharatidza, kunyangwe isu tisina chokwadi chekuti sei nezve inobatika mhinduro kana ichienzaniswa nekiibhodhi yenguva dzose ine makiyi emuviri. Kune zvakare stylus ine 'Hey Siri' rutsigiro. Pakazere, iyo MacBook Folio inopa iyo iPad Pro vibes sezvo ichitamba makona akatenderedzwa, ane flat edges.
Nekuda kwekutetepa chaiko kweMacBook Folio, hapana nzvimbo yekugara I/O yakakura kupfuura USB-C ports, uye kana pfungwa iyi ikashanduka kuita chokwadi, izvi zvinogona kutsigira Thunderbolt 4, kana Thunderbolt 5 kana chiyero chitsva. inosumwa mune ramangwana. Nekuda kwebudiriro inoenda mukugadzira chigadzirwa chakadaro, chinoda kuve chinoshanda, chinotakurika, uye chinoshanda. Muchidimbu, hatingashamisi kuona mutengo weti isingasviki $2,499.
Ehe, isu tichaona kuti ndeipi nzira yemitengo yeApple kamwe chete MacBook yekirasi ino yatanga, asi chengeta wallet yako yakazara nekuti haisi kuzodhura.
The post Iyi MacBook Folio Concept inoratidza Kuti Mac Inotakurika ingatarise sei neFoldable Form Factor yakatanga kutanga Wccftech.
Motorola Moto G Stylus 5G ongororo: Niche inoridza chikomborero uye kutuka